ANALAKELY - AMBOHIJATOVO : Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao
Tsy mahita rirany amin’ny fikasana hamboly korontana eto amin’ny Firenena ireo ekipan’ny Mpanohitra. 2 mars 2021
Ny sabotsy lasa teo, mbola nandamoka indray ny hetsika izay nokasain’ny Rodoben’ny Mpanohitra eto Madagasikara (RMDM) hatao tetsy Ambohijatovo sy Analakely.
Nipoapoaka ny fanambaràn’ireo lohandohan’ny mpisorona eo anivon’ny RMDM tamin’ny herinandro lasa teo iny fa tsy maintsy hanao hetsika izy ireo, ny sabotsy 27 febroary. Nisy ny fanambaràna ôfisialy nataon’izy ireo narahin’ny fanambaràna izay naparitaka teny anivon’ny tambajotran-tserasera sy ny antso isan’andro tany anatin’ny haino aman-jery.
Mazava ho azy, fa tsy nahazoana alalana hatramin’ny farany ny hetsika noho izy mamofompofona fanohintohinana ny filaminam-bahoaka. Ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny fitandroana ny filaminana ihany koa dia nanao fanambaràna nifanesy fa tsy maintsy handray fepetra manoloana ny hetsika tsy nahazoana alalana mazava. Vao maraina dia efa rakotra mpitandro filaminana Analakely ka hatreny Ambohijatovo. Saika nahitana ny Tafika sy Zandary ary ny Polisy ireo lalana miditra amin’ireo toerana roa ireo. Feno ny fepetra tamin’ny fitandroana ny filaminana. Voasoroka indray ny fanakorontanana nokasain’ireo tsy maty voalavo an-kibo natao.
Ankilany, tahaka ny efa mpiseho mahazatra dia tsy tazana teny an-toerana ireo mpitarika avy amin’ny Rodoben’ny Mpanohitra na dia iray aza. Antoko politika maromaro anefa no mivondrona ao anatin’ity herin’ny fanoherana ity saingy na tamingana iray avy amin’izy ireo aza tsy nisy sahy nipoitra tany Analakely. Famitahana an’ireo mpanara-dia azy tahaka izany foana no ataon’ireo Mpanohitra hatreto. Iretsy voalohany izay mbola manaiky hatao fitaovana politika ihany kanefa efa tsy takona afenina intsony izao fa fitiavan-tseza no mitondra azy ireo mankany amin’ny fikasana fanaovana sorona ny vahoaka madinika.
Fantatra fa rehefa nahita ireo mpitariky ny RMDM fa tsy hahita hirika hidirana ao an’Analakely dia nanao fanambaràna indray fa tsy raikitra indray ilay hetsika nokasaina hatao.
Mandra-pahoviana, hoy ireo mpivarotra eo Analakely, no hiaina tranga tahaka izao izy ireo isaka ny sabotsy ? “Tsy mila korontana intsony izahay, avelao izahay hiasa ary avelao ny Fitondram-panjakana hampandroso ny Firenena. Miandrasa fifidianana amin’ny 2023”, hoy ny antsoantson’ny olon-tsotra sy ny mpivarotra tetsy Analakely.